# आलस्य भन्दा ठुलो अधिक घातक समिपर्बती शत्रु अर्को छैन।
# आय भन्दा अधिक खर्च गर्ने मनिषले तिरस्कर सहनु पर्छ कस्ट भोग्नु पर्छ।
#आफ्नो लागि त पसुपंछी पनि बाच्दछन तर अर्काको लागि बाच्नुनै जीवन हो।
#पुत्र यदी कुपुत्र भईदियो भने त्यो बाट केही फाईदा र आशा हुँदैन।
#असल किताब पढ्ने मनिस् कहिलै खराब हुन सक्दैन।
#पुस्तक बिनाको घरलाई झ्याल बिनाको कोठा संग दाज्न सकिन्छ।
#देखिने आँखा दुइे भए पनि दिमाग भित्र हजारौं आँखा हुन्छ ।
#अर्काको नक्कल गर्नु भन्दा आफु जस्तो छ त्यस्तै देखिनु राम्रो हुन्छ।
#हरपल प्रसन्न रहनु पर्दछ किनकी अप्रसन्नता नै मनिसको सबैभन्दा ठुलो सत्रु हो।
#जो व्यक्ती अरुको दुर्नाम गरेर यश कमाउन चाहन्छ त्यस्को मुखमा यस्तो दाग लाग्दछ जो कि मर्दा पनि पखालिदैन।
#सत्य र असत्य को बिबेक गर्ने बुद्धी जसमा हुन्छ त्यसलाई पण्डीत भनिन्छ।
#रिसले हैन्न प्रेमभावले मात्र वैरभाब शान्त हुनसक्दछ।
काम लगायर चाकरलाई दु:खमा दाजुभाइलाई र गरीव भएमा आफ्नी स्त्रीलाई चिन्नु पर्दछ।
#ब्राहामणहरुको बल बेद बिज्ञान बिधा,राजाको बल सेना,वैश्यको बल धन ,माहत्मा साधु सन्तको बल भाक्ति र सृस्‍टिको बल ईश्वर हुन।
#कुन बेला के गर्ने हो र मित्र को हो? देश कुन हो? लाभ र व्यय के छ् म कसको हुँ म म क् सामर्थ्य छ भन्ने बराबर बिचार गर्दै गर्नु पर्छ।
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 5:15 PM